musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Zvimwe zveThailand zvinovhurwa mumasvondo matatu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Mamwe kuvhurwa muThailand
Phuket inoona nhanho yekuenda kuThailand kuvhurwazve kubva kutanga kweCOVID-19 uchishandisa chirongwa cheSandbox chekushanya seyakatungamira.
Pamwe chete ne Samui Plus uye 7 + 7 Zvirongwa zvekuwedzera, izvi zvakaratidza kuve zvakakosha mukumutsiridza Thai kushanya.
Vanopfuura 27,000 vafambi vekunze vakashanyira Thailand pasi pePhuket Sandbox, Samui Plus, uye 7 + 7 Zvirongwa zvekuwedzera.
Thailand yakavhurazve zvishoma nezvishoma kutashanya kubva munaChikunguru 1, Chikunguru 15, uye Nyamavhuvhu 16.
Senzvimbo yekuchaira kwekuvhurwa, iyo Phuket Sandbox yakagamuchira 26,400 vashanyi mumwedzi miviri yekutanga, kubva payakatangwa muna Chikunguru 1 kusvika Nyamavhuvhu 31, ichigadzira 1,634 mamirioni Baht mumari.
Mari yacho yaisanganisira 565 miriyoni Baht pane pekugara, 376 mamirioni Baht pakutenga nekushanya, 350 miriyoni Baht pane chikafu nechinwiwa, 229 mamirioni Baht pamabasa ekurapa nehutano, uye 114 mamirioni Baht kune vamwe. Avhareji mutengo wezororo revashanyi kuPhuket munaChikunguru-Nyamavhuvhu yaive 61,894 Baht, kubva pa58,982 Baht yakanyorwa muna Chikunguru.
The Phuket Sandboxmisika mishanu mikuru sosi yakaramba iri USA iine 3,482 vakasvika, ichiteverwa neUK ne3,351 2,909 vakasvika, Israel ine 2,092 yakasvika, Germany ine 2,083 yakasvika, uye France ine XNUMX yakasvika.
Vakadzivirirwa zvizere uye vasina chikonzero chekuisa vanhu voga, 26,400 vanosvika vauya kuPhuket nendege dzakananga dzepasi rese dzinoshandiswa nendege huru kubva kunzvimbo dzakatenderedza pasirese. Izvi zvaisanganisira Thai Airways International kubva kuCopenhagen, Frankfurt, Paris, London, neZurich; Etihad Airways kubva ku Abu Dhabi; Qatar Airways kubva kuDhaha; EL AL Israel Airlines kubva kuTel Aviv; Cathay Pacific anobva kuHong Kong; Emirates kubva kuDubai, uye Singapore Airlines kubva kuSingapore.
Ava vasvika vakagadzira 366,971 makamuri husiku paSHA Plus mahotera akasimbiswa paPhuket - 190,843 husiku muna Chikunguru uye 176,128 husiku muna Nyamavhuvhu, zvichiteerana. Nema 95,997 emakamuri husiku parizvino ari mumabhuku aGunyana, iwo mwedzi wemwedzi mitatu muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu parizvino uri pahusiku hwemakamuri 462,968 2021. Tichitarisa kumberi kumberi, huwandu hwazvino hwemakamuri husiku kwenguva yaGumiguru 2022 kusvika Kukadzi 24,947 inguva makumi mana nemakumi mapfumbamwe nemana emakamuri manheru.
Vashanyi vePhuket Sandbox vanofanirwa kugara paSHA Plus mahotera akasimbiswa paPhuket nekuda kwekuchengetedzeka kwavo. SHA Plus certification inoratidza kuti hotera inosangana nechengetedzo matanho ekudzora COVID-19, uyezve kuti 70% yevashandi vayo vakabaiwa zvakakwana.
Pamwe padanho rinodiwa rehutano nekuchengetedzeka munzvimbo dzevashanyi vekunze kwenyika, chirongwa chekudzivirira Phuket kubva muna Nyamavhuvhu 31 chakaona 92% yevagari vemo vakagamuchira mushonga wekutanga wekudzivirira, nepo 75% vakapedza iwo maviri-madosi akateedzana.
Kuisa chiratidzo chechipiri che Mugumo weThailandns kuvhurazve kutashanya, chirongwa cheSamui Plus chakatangwa muna Chikunguru 15, zvichibvumira vashanyi kuti vashanyire Koh Samui, Ko Pha-ngan uye Ko Tao. Ivo vanogona kuita izvi nekupinda zvakananga muSamui kana, kubva 16 Nyamavhuvhu, nekufamba ikoko mushure mekutanga kugara husiku hunomwe pasi pePhuket Sandbox, sarudzo yekupedzisira iyo vashanyi mazana matatu nemakumi mana nenomwe vakaita kudaro.
Mumwedzi wekutanga nehafu, kubva munaChikunguru 15 kusvika Nyamavhuvhu 31, chirongwa ichi chakagashira vashanyi vanosvika mazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe, vaine husiku hwemakamuri 918 6,329, zvichiita 37.6 miriyoni Baht mumari. Vazhinji veavo vakasvika vaibva kunyika dzeEurope neUnited States.
Kubatsira kufambisa chirongwa ichi Bangkok Airways '92 yakavharwa nzira dzendege pakati peSamui neBangkok yekufambisa / kuendesa vafambi kuSamui Plus ichibatanidza kuburikidza neguta guru reThai. Uye zvakare, iyo ndege inoshandawo nendege pakati pePhuket neSamui yevashanyi vanobva kuPhuket Sandbox.
Mukota yekupedzisira yegore rino kusvika 9 Zvita, Samui Plus parizvino akarekodha 9,195 860 dzimba dzemakamuri pamabhuku kubva kune vashanyi mazana masere nemakumi matanhatu. Izvi zvinosanganisira 7,397 makamuri emanheru akachengeterwa vashanyi 591 pasi peSamui Plus uye 1,788 makamuri husiku nevashanyi 269 pasi pePhuket Sandbox uye 7 + 7 Extension.
Phuket Sandbox 7 + 7 Kuwedzeredzwa
Yakatangwa muna Nyamavhuvhu 16, 2021, iyo Phuket Sandbox 7 + 7 Yekuwedzera chirongwa ndicho chinhu chazvino che'Thailand Kuvhurazve 'umo vashanyi vanopihwa mikana yakawanda yekushanyira nzvimbo dzinoverengeka pakushanya kwavo munyika.
Chirongwa ichi chinogonesa vafambi vekunze kudzora kusungirwa kugara muPhuket kubva ku14 kusvika ku7 husiku, mushure mezvo humwe husiku hunomwe hunogona kushandiswa muKrabi (munzvimbo dzakasarudzika dzeKo Phi Phi, Ko Ngai, kana Railay Beach), muPhang-Nga (in Khao Lak kana Ko Yao), kana muSurat Thani (pana Ko Samui, Ko Pha-ngan, kana Ko Tao).
Kubva kuPhuket, Samui yaS Surat Thani, Ko Pha-ngan uye Ko Tao inogona kusvika nendege dzeBangkok Airways dzakananga kubva kuPhuket; Krabi's Ko Phi Phi, Ko Ngai uye Railay Beach inogona kusvikwa neSHA Plus-yakasimbiswa chikepe uye feri masevhisi kubva kune anotenderwa piers; Phang-Nga's Khao Lak inogona kusvikwa neSHA Plus-yakasimbiswa mota yekufambisa mota kubva kuPhuket, nepo Ko Yao Noi kana Ko Yao Yai inogona kusvikwa kuburikidza neSHA Plus-yakasimbiswa chikepe uye feri masevhisi kubva kune anotenderwa piers.
Dzinouya nzvimbo dzekuvhurazve kune vakazara vaccine vafambi vekunze
Dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, uye Pattaya, zvakarongwa kuvhurwa kubva muna Gumiguru 1, 2021.
Izvi zvakaita seThailand yakaenderera mberi ichiita fambiro mberi inokosha pakubayiwa nhomba yevagari vemunyika, kubvira kuburitswa kwenyonganiso kwakatanga muna Chikumi 7.
Kubva muna Kukadzi 28 kusvika 4 Gunyana 4, 2021, vanhu vanosvika 9,879,371 munyika yose vakabayiwa majekiseni akazara, kana kuti vakapedza majekiseni maviri emushonga weVOVID-19, vamwe vanhu 25,104,942 vagamuchira mushonga wekutanga wekudzivirira, nepo vamwe vanhu 603,363 vatambira chirwere chavo chechitatu chekudzivirira, sekureva kwebazi rezveutano.
Dmytro Makarov anobva kuUkraine, achigara muUnited States kwemakore angangoita gumi segweta rekare.